စွဲလမ်းခဲ့ မိဘူးသော စာအုပ်တစ်အုပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စွဲလမ်းခဲ့ မိဘူးသော စာအုပ်တစ်အုပ်
စွဲလမ်းခဲ့ မိဘူးသော စာအုပ်တစ်အုပ်
Posted by Iris on Mar 13, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 29 comments
အစ်မ ၀င့်ပြုံးမြင့် ရဲ့ အဌမနေ့ ပို့ ကိုဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းက စွဲစွဲလမ်းလမ်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ ဘူးတဲ့ ”Wuthering Heights” ကိုသွားသတိရမိတယ်.. မူလတန်း စတက်ကာစ ကျမ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ တာ မူရင်းစာအုပ် မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး. ဘယ်သူရေးမှန်းလည်း မသိပါဘူး..အခုထိ အဲဒီစာအုပ် က ပေးချင်ခဲ့ တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိသေးပါဘူး..ဒါပေမဲ့ ဒီစာအုပ် က ကျမ ကို တော်တော်လေး ဆွဲဆောင်လွန်းခဲ့ပါတယ်….
အဲဒီအတွက် သောကြာနေ့ ညနေ တွေမှာ ၀ါးခယ်မ မြို့ ကနေ ကျမတို့ ရွာကိုလာမဲ့ သင်္ဘောသေးသေးလေးကို မျော်ရတာ အမောပေါ့ . အဲဒီ့ သင်္ဘောသေးသေးလေးကို ကျမတို့ ဒေသ က ပဲ့ထောင်လို့ ခေါ်ကြတယ်. ကျမချစ်တဲ့ရွာလေးဟာ ချောင်းကမ်းဘေးကိုမျက်နှာမူပြီး အနောက်မှာ လယ်ကွင်းတွေ တမျှော်တခေါ်နဲ့ မြို့ နဲ့ တော်တော်အလှမ်းဝေးလှပါတယ်. မြစ်ချောင်းတွေ ထူပြောလှတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကျမတို့ ဟာ ရေကြောင်းလမ်းကိုပဲအထိက အားပြုရပါတယ်.ကျမ တို့ ရွာက လူကြီးတွေရဲ့ အိမ်မက်ဟာသူတို့ ရဲ့ ဘ၀မှာ တစ်ခါလောက် ရွှေတိဂုံဘုရား ကို ဖူးမြှော်ခွင်ရဖို့ လို့ ဆိုရင် ရန်ကုန် က လူတွေက ရယ်ကြမလားပဲ.. ဒါတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ အတိတ်မှာ တကယ့် ဖြစ်ရပ်တွေပါ.
ကျမ မျော်လင့်စောင့်စားနေရတဲ့ သောကြာနေ့ မှာ မြို့ ကျောင်းကပြန်လာတဲ့မမ ဟာ အဲဒီ စာအုပ်ကိုသူ့ ရဲ့ လွယ်အိတ်ထဲမှာထည့်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ တယ်. မမ ကို အိမ်ရှေ့ကသင်္ဘောဆိုက်တဲ့ တံတားထိပ်မှာပြေးကြို တယ် ပြီးတော့ သူ့ ရဲ့လွယ်အိတ်ကိုလွယ်ပြီး အိမ်အပေါ်ထပ်ကိုတက်လာခဲ့ တယ်. လွယ်အိတ်ကို ကြိုးက ကိုင်ပြီး မှောက်သွန် ပစ်လိုက်တယ်…ဟီးဟီး…တွေ့ ပါပြီ ကျမရဲ့ ချစ်လှစွာသော စာအုပ်ထူထူလေး.. မမ တို့ ကအဲလိုစာအုပ်မျိုး ကိုအထူးထုတ်လို့ ခေါ်ကြတယ်. မမ တို့ ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်ထားတာပါ. အသံထွက်တွေလဲပါတယ်.့ အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ပိုဒ် ပြီးရင် အသံထွက် ပြီးတော့ ကျမရဲ့ စိတ်ဝင်းအစားဆုံးအပိုင်း မြန်မာပြန်. အင်း ကိုရီးယားကား ကြည့်ခဲ့ ရသလိုပါပဲ အပတ်စဉ် မမ အိမ်အပြန် ကိုမျော်ရတာ. မမကိုတစ်ခါလောက်တော့ပြန်မေးကြည့်ချင်သေးတယ် အဲဒီ သင်ခန်းစာကို အမှတ်ရသေးရဲ့ လားလို့ . မမနဲ့ က အသက်ကွာတော့ အဲဒီ အချိန်တုန်းက မမ က ကျမ ကိုသူငယ်ချင်းလို မဆက်ဆံပါဘူး. မမ ကိုကြောက်လို့ စာအုပ်ကိုခိုးဖတ်ပြီးရင် သူ့ လွယ်အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်ထားရတယ်. အခုတော့ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းကိုသေသေချာချာမမှတ်မိတော့ဘူး..ဒါပေမဲ့ တော်တော်လေးငိုခဲ့ဘူးတာတော့မှတ်မိနေသေးတယ်.အခုတော့အရာရာမှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်သွားပြီ…
ကျမ ငယ်ငယ်တုန်း က စာဂျပိုးတစ်ကောင်ပေါ့..ဒါပေမဲ့ ကျမ နှစ်နှစ်သက်သက် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေက ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေ မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး.. နည်းနည်းရယ်စရာကောင်းခဲ့ တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုကိုအခုထိ မှတ်မိနေသေးတယ်. အဲဒီနေ့က ကျမ ဆုရခဲ့တယ်..ပြီးတော့အရိုက်ခံရတယ်…ဆုပေးတာက ပြီးခဲ့တဲ့စာသင်နှစ်အတွက်..အရိုက်ခံရတာက အဲဒီနေ့ ကအိမ်စာ လုပ်မသွားဘူး.
ကျမ စာစဖတ်တတ်တော့ ကျမ မေမေ က အရမ်းဂုဏ်ယူခဲ့ တယ်. ငါ့ သမီးက ငယ်ငယ်လေးနဲ့ စာဖတ်တတ်တယ် ကြီးလာလို့ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ရင် ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ် လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်. မေမေကိုယ်တိုင်လည်း ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ သမီးအကြီးဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မေမေ့ မှာရွေးချယ်ခွင့်တွေ အများကြီး မရှိခဲ့ ပါဘူး. တောရွာဓလေ့ အတိုင်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ပညာရေးနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီး မြို့ ကျောင်းမရောက်ခဲ့ပါဘူး. အဲဒီအတွက်မေမေဟာ ကျမတို့ ကိုစာကြိုးစားဖို့ကိုအမြဲတိုက်တွန်းလေ့ရှိတယ်.
ရွာမှာရှိတဲ့ မူလတန်း ပညာရေး ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ မျော်လင့်ချက်တွေအတွက်ခါးသက်လွန်းလှတဲ့လောကဓံ ကိုရင်ဆိုင်ရပြီပေါ့ . ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုက လာတဲ့ကျမ အတွက်အရာရာဟာ ခက်ခဲလွန်းခဲ့ပါတယ်. တခါတလေ ဘ၀ကိုအရှုံးပေးခဲ့ ချင်မိပေမဲ့ ကိုယ်ကိုံကိုယ်တည့်မတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်. ပြင်ပ ဗဟုသုတ စာပေတွေကို ဖတ်ခဲ့တဲ့ အကြိုးကျေးဇူးလို့ ပဲ လို့ အခုထက်ထိ ယုံကြည်နေတုန်းပါပဲ.
Mandalay Gazette ကိုနှစ်ချိုက်မိတာကလည်း ကျမ ကို ဗဟုသုတ ရစေလို့ပါပဲ..ကျမ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ သိခွင့်ရခဲ့တယ်. သူကြီးရဲ့ Open Minded ကိုလေးစားပါတယ်.. စာရေးသူတွေရဲ့စိတ် တံခါးပေါက်ကိုဖွင့်ပေးပြီး လွတ်လတ်စွာနဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့ ယူဆပါတယ်..တခါတလေတော့ ၀င်ပြီးတည့်မတ်ပေးတယ်လို့ လည်းထင်ပါတယ်. အရီးလတ်ရဲ့ စေတနာ ကို ပိုစ့်တွေနဲ့ ကောမန့် တွေမှာခံစားရတယ်.. (အရီးလတ်က မုန့် ကျွေးမယ်ဆိုလို့ှဖားထားတာ..ဟီး.. တကယ်ပြောတာပါ) ဂီဂီ ရဲ့ အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ ပို့ စ် တွေကိုလည်းအားကျမိပါရဲ့ . ကျမက အချက်အလက် စုရတာ ပျင်းတယ်. အခုတောင်စာရေးရတာ ပျင်းသွားပြီ….ကျမ အားကျရတဲ့ စာရေးဆရာတွေ အများကြီးကျန်သေးတယ်……
“ ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်.. ဆရာမ TTNU, ဦးဖော , မမ..မဝေ.ဆူး. ဦးကြောင်..ဦးပု…ဦးဘလက်ချော. The Winner,
အကုန်လုံးကိုလေးစားပါတယ်…ကိုဖုန်းကျော် ရောပဲ..မတူညီတဲ့ ရှု့ ထောင့်ကနေ ပွင့်လင်းတဲ့ အမြင်တချို့ ကို မြင်ရသလိုပဲ…
၀ူးသရင်း ဟိုက်ထ်စ် ကိုရေးခဲ့တာ စိုင်းဆိုင်း ခမ်းလှိုင်
Emily Brontë ပါ
မန့်တာကို စိုင်းကို လွတ် အောင် မန့်စေချင်ပါဒယ်။
ဝူးသဒင်းဟိုက်ကို ရေးခဲ့တာ ပုညခင် ဘာာာ။ ဟိဟိ။
ပြီတီနဲ့ အိမ်သာ တို့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးသွားပါဘီ.။ ခိခိ။။
ကျနော်က အင်္ဂလိပ်လို မဖတ်ဖူးဘူးဗျ။ ပထမမျက်နှာမှာတင် အိပ်ပျော်ပျော်သွားလို့။
ဖတ်ပြီး မငိုတော့ မငိုဖူးဘူး။
Heathcliff ကို ချစ်တယ်။
ဒါပေမည့် အသက်ကြီးတော့ သူ့ရဲ့ အပူတို့ စိတ်ရဲ့ ပူလောင်မှုတွေကို မြင်တတ်ပြီး ကြောက်တတ်လာတာ။
အညှိုးတို့ အမုန်းတို့ဆိုတာ ပတ်သက်တဲ့ လူတိုင်းကို ပူလောင်စေတာကလား။
ွှအင်း….ခိုင်ဇာရေ ကျမက မမရဲ့ ကျောင်းသင်္ခန်းစာ ကိုခိုးဖတ်ခဲ့တာ. အဲဒီ တုန်းက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှူကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်. အခုနေ ပြန်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ ရင် တော့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ မသိဘူး.. မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြာပြီ..အစ်မ ၀င့်ပြုံးမြင့် ရဲ့ အဌမနေ့ ကြောင့် သတိရသွားတာ…
ဟုတ်ကဲ့ …နောက်ကို စိုင်း မပါဇီယပါပူး..
စဂါးမစပ် (ဦး)ဘွဲ့မှူး အတော်ကံကောင်းတယ်နော်..
ဒက်ဂလောက် .. ဒက်ဂလောက်..
ဟီးဟီး…စိုင်းဆိုင်း ခမ်းလှိုင် မဟုတ်မှန်းတော့ သိတာပေါ့. အခုတော့ ဦးဖွတ်ကျား မဟုတ်မှန်းလည်း သိသွားပြီ..:) လင့်ခ် အတွက် ကျေးဇူးပါ..
ကျေးဇူးထပ်တင်ပါတယ် lele ရေ။
အဲဒီ စာအုပ်တော့ မဖတ်ဖူးဘူး။
ဇာတ်လမ်းတွဲ တော့ ကြည့်ဖူးလိုက်တယ်။
lele စာတွေလဲ ဖတ်ချင်ပါတယ်။
အရီးလတ်ရေ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေရှိတာမသိခဲ့ဘူး..နောက်ပိုင်း ကိုရီးယား လှိုင်းနဲ့ မျောပါသွားတယ်… ဟီး
၁၀ တန်းတုန်းကတော့ ပြဌာန်းစာအုပ်အနေနဲ့ သင်ခဲ့ရတာပဲ
ကောင်းတယ် ကြိုက်ခဲ့တယ် ရယ် တချို့ ဇတ်ကောင် စရိုက်တွေရယ် နဲနဲ မှတ်မိတာက လွဲလို့ သေချာ မမှတ်မိတော့ဘူး
တစ်ခါ တစ်လေ ငယ်ငယ်က အဖြစ်အပျက်လေးတွေက
ဘာကြောင့်မှန်း မသိပဲ အချိန်တော်တော်ကြာ သတိရနေတတ်တာ အံသြဘို့ ကောင်းတယ်
ဟုတ်တယ် ကိုNozomi…ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး သေသေချာချာလည်းနားမလည်ပဲနဲ့ အဖြစ်အပျက်အချို့ ကိုမှတ်မိနေတတ်တယ်. မေ့မေ့ရဲ့ရှေးဟောင်းသစ်သား သေတ္တာကြီးထဲက စာအုပ်တွေကိုလွမ်းမိတယ်. ဆရာ ပီမိုးနင်းရဲ့ စာအုပ်တွေလဲ တော်တော်များများရှိခဲ့ တယ်..ဘ၀တစ်သက်တာ မှတ်စုလို စာအုပ်တွေရော သေသေချာချာမသိတော့ဘူး.. ရုပ်ပုံတွေပဲလိုက်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ အင်္ဂလိပ် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဆရာတာရာမင်းဝေက ၀တ္ထုတစ်ပုဒ် အနေနဲ့ ထုတ်ခဲ့ ဘူးတယ်. ကျမ တို့့မြို့ ကိုအပြီးပြောင်းတော့ မေမေ ဘယ်သူ့ ကိုပေးခဲ့လဲမသိဘူး..
အားကျတယ်ဆိုလို့ သွေးတောင်နားထင်ရောက်သွားပြီ။ အကြောင်းမသိလို့ အားကျတာပါ ညီမလေးရယ်။ အကြောင်းသိရင် ဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိ။ အမ ငယ်တုန်းက အချစ်ဝတ္ထုတွေလှိမ့်ဖတ်၊ ရည်းစားစာ အရေးကောင်းလို့ ခုလောက်ဖြစ်လာတာပါ။ စာကြီးပေကြီး သိပ်မဖတ်ဖူးဘူး။ တကယ်ဆိုရင် အချစ်နယ် အလွမ်းတောထဲမှာပဲ ပျော်မောနေချင်သူပါ။ ဘာပဲပြောပြော ညီမကြောင့် အဠမနေ့ကို ဆက်တင်ဖို့ အားတွေ ရှိသွားပြီ။
အစ်မရေ..တကယ်ပြောတာပါ…အစ်မတို့ လိုစာရေးဆရာတွေကို သိပ်အားကျတာ..စာရေးဆရာကောင်းဖြစ်ဖို့ စာတွေအများကြီးဖတ်ရတာရယ်. စာအစုံဖတ်ရတာရယ်. နိုင်ငံတကာကစာအစုံဖတ်နိုင်အောင် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ရမယ်….ပြီးတော့ စာဖတ်သူတွေ နူးညံ့စွာနဲ့ ပေးချင်တဲ့ အတွေးအခေါ်…တကယ်အားကျလေးစားရပါတယ်.
Wuthering Heights ကို မသင်ခဲ့ရတော့ သိပ်ပြီးမစွဲလမ်းမိဘူး။
ကျမတို့က ရှိတ်စပီးယားပြဇာတ်တွေ သင်ရတဲ့ ခေတ်ကိုလည်း မမီလိုက်ဘူး။
စကားအတင်းစပ်..ပို့စ်ထဲမှာ ၀ါးခယ်မလို့ တွေ့လိုက်သလားလို့ ။
အန်တီ ပဒုမ္မာရေ…ကျမတို့ ရွာလေးက ၀ါးခယ်မနဲ့ ကျုံမငေး ကြားမှာပါ. ကျမကတော့ ၀ါးခယ်မ နဲ့ တော်တော် စိမ်းပါတယ်..လေးတန်းအောင်တော့ မြို့ ကျောင်းတက်ရမယ်မှတ်နေတာ..ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းကြောင့် ကျုံမငေးမြို့ ကနေ သင်္ဘောနဲ့ နှစ်နာရီ. သုံးနာရီလောက်ထပ်သွားရတဲ့ အဒေါ်တွေနေတဲ့ ရွာကအလယ်တန်းကျောင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်. အဲဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းသွားပြီ…
အကြည်တော် ….( အဲ..အကြည်တော် စာအုပ်တွေက အဲသလောက် ထူပါဘူး .။ ပါးပါးလေးရယ်…ဖတ်ရတာ တန်ဝူး…. )
အခုရေးသားတဲ့ပိုစ့် ရှင်ကလည်း..
စာအရေးအသားသွက်လက်ပြီး…ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေချောမွေ့နေတာ သိသာပါတယ် ။
ရသ တွေ ရေးရေး..
ခံစားမှု / အက်ဆေး… ကဗျာ…ဘာရေးရေး..
ဖတ်တဲ့ သူ..ရသ ရအောင် ရေးနိုင်မယ့် လက်မျိုးလို့ …
ဟုတ်ပါတယ် မောင်လေး အလင်းဆက်….အကြည်တော်က ဘီလူးပါ.. ၀က်သားဟင်းလည်းမချက်တတ်ဘူး ဟီး…နောက်တာပါ… အခုလို မြှောက်ပြောတဲ့ အတွက် အရီးလတ်မုန့် ဝယ်ကျွေးတဲ့ အခါ တစ်ဝက်ခွဲပေးမယ်နော်..
ဝက်သားဟင်းဟိုက်ကို ရေးခဲ့တာ တရုတ်စာရေးဆရာဂျီး ဟူကျင့်တောင်ပါ။ အဲဒါကို ရုရှား စာရေးဆရာကြီး လီယိုတော်စတွိုင်းက တထောင့်တည ပုံပြင်များဆိုပြီး မှီငြမ်းရေးခဲ့ပါဂျောင်း…
ကြောင်သားဟင်းကိုချက်ခဲ့တာ…..ဒိုဘာမန် ဦးခိုင်ပါ….ဆာကေးနဲ့ အမြီး လုပ်မလို့ ပါ….
စကားအတင်းစပ် (credit to Kai) ကျမ Mandalay Gazette ကို စ ဖတ်တော့..ဦးကြောင်ရယ်..သူကြီးရယ် ..ဦးပုရယ် ကို တစ်ယောက်တည်းလို့ ထင်နေတာ..သူကြီးသုံးကိုယ် ခွဲထားတယ်ထင်နေတာ…နောက်တော့ ဦးပုမဟုတ်မှန်းသိလာတယ်…
သဂျီးနဲ့က မကြာခင် အမျိုးတော်မှာပါ၊ အဲဒီကြမှ သူရှာသမျှ စည်းစိမ်တွေ ဖြုန်းပစ်မယ်၊ အိမ်ဦးခန်းမှာ ဝိပဿနာ တရားစခန်းဖွင့်မယ်… လာကြနော် အခုထဲက နေရာဦးထားဂျ။။ ဝင်ကြေးအခမဲ့ (သဂျီးစည်းစိမ် မကုန်သရွေ့ ) အစားအသောက် – သက်သက်လွတ် မွန်းလွဲညစာ မကျွေးပါ၊ ဥပုသ်စောင့်ရမည်။
စာဖတ်ရတာဝါသနာပါတယ်ထင်တယ် lele က
ပျင်းလောက်အောင် သင်ခဲ့ရတာပါ၊ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲ ကျလိကျလိ ဖြစ်တဲ့ ဇတ်ဝင်ခန်းလေး မှတ်မိတုန်းပဲ။ ကိုရီးယား လွဲတာလောက်တော့ ပျင်းသနားတယ်၊ ကောင်မလေးက သူ့အကြောင်းပြောနေတာ သူက ခုံတန်းလျားမှာ အိပ်နေရင်း ကြားလိုက်တာလေ၊ မကောင်းပြောတာ တောက်လျှောက်နားထောင် ပြီးမှ၊ ဘာပဲ ပြောပြော သဘောကျ တယ်ဆိုတဲ့ စကား၊ ကောင်းတာကျ၊ နားမထောင်မိသွားပဲနဲ့ လူဆိုးဖြစ်၊ ပြီး ဒီဇာတ်လမ်း ဖြစ်လာတာကို အဲဒီတုန်းက တနုံ့နုံ့ နဲ့၊ သူသုံးတဲ့ စကားလုံးတွေက ရှေးရှေး စကားလုံး တွေဆိုတော့ ဆယ်တန်းအရွယ်နဲ့ ကြီးလွန်းတယ် ထင်ခဲ့တာဗျ။ အခုတော့ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ ခေတ် ထင်ပါ့။
ကျောင်းသင်္ခန်းစာဆိုရင် ကျမလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ဘူး.. မမဖတ်စာအုပ်က ကျမအတွက် ၀ထ္ထုတစ်ပုဒ်လို ဖြစ်ခဲ့လို့ စွဲလမ်းခဲ့ရတာပါ…..
အဲ့ ၀ဲသရင်းဟိုက်တော့ ကျောင်းစာထဲ ဖတ်ဖူးတယ် …
အဲ့လောက်တော့ မကြိုက်ဘူး … အဲ့အချိန်မှာ ဖတ်ဖြစ်နေတာက မောင်ထင်၊ သော်တာဆွေ၊ မြသန်းတင့်
တကယ်စွဲလမ်းခဲ့ဖူးတာက တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိူင်ရေးတဲ့ တောင်ကြီးက ကျောက်တောင်ချွန်းကြီးနဲ့ ကောင်မလေး ၂ယောက်အကြောင်း ၀တ္ထုနာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ နောက်တအုပ်က ကြယ်နီရဲ့ ကိုတံငါ ၀တ္ထုတွေ။ အဲ့ချိန်တုန်းက ရေဒီယိုက စန္ဒယားထွန်းညွန့်ရဲ့ ကိုယ့်ရပ်ဌာနေသီချင်းကို လွှတ်ခိုက်မိတယ် ….
ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့ …
သူ့အကြိုက် ကိုယ့်အကြိုက် မျှဝေကြည့်တာ …
ကျမ လည်းဆရာကြီး မောင်ထင်. ဆရာသော်တာဆွေ စာအုပ်တွေ ဖွဖူးတယ်..ဆရာကြီးသော်တာဆွေမှာပြောမနာဆိုမနာ စာရေးဆရာ သူငယ်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ တယ် မှတ်တယ်… “သော်တာဆွေ….တော်ရာနေ” ဆိုတဲ့ နောက်ပြောင်ခနဲ့ ထားတဲ့ စာကိုဖတ်မိခဲ့သလိုပဲ. ဆရာမြသန်းတင့်လဲဖတ်ဖူးခဲ့တယ်..ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်ရောပဲ.. ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိူင်ရောပဲ.. ကမာရင်ကွဲ ရေးတဲ့စာရေးဆရာတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး.
ဆရာ ဒဂုန်တာရာလို့ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ
သူ့ကိုယ်သူ တော်ရာ ခွေလို့ရေးသလို
ဂဠုန်ခွာနာ တို့ ဘာတို့ ရေး တာ ဖတ်ဖူးပါတယ်
ဖိုးသော်တာ စန္ဒာ လကိုကွယ် ဆို တဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးမှာလည်း
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီ ၀တ္ထုလေးကို မှီးပြီး ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များက မဂ္ဇဇင်းမှာ ဆုရဖူးလို့ မှတ်မိနေပါတယ်ဗျို့
ဆရာကလည်း သူ့ရဲ့ အဲဒီ ၀တ္ထုကို
အေ ဂျန်းနီး တူးအေ စတား ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်က
မှီးတာလို့ မှတ်သားဖူးပါတယ် မ လီခင်ဗျား
ကျုပ်ငယ်ငယ် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတုံးက အသားမည်းပြီး ဆံပင်ကောက်လို့ Heathcliff တဲ့လေ…
Ghostly Catherine ရဲ့ “Let me in… let me in” ဆိုတာလေးကို မေ့မရသေးသလို…
ဟို… Linton မိသားစုကိုလည်း သနားမိပါရဲ့…
ဦးကျောက်ရေ…အပေါ်မှာ ခိုင်ဇာပြောသွားတယ်…ပြီတီ နဲ့ အိမ်သာ ရိုက်ပြီးသွားပြီတဲ့ …ဦးကျောက်အတွက် ဇာတ်လမ်းအသစ်ရှာပေးမယ်…
Wuthering Heights ကို ကျောင်းစာအနေနဲ့ မဖတ်ခဲ့ရဘူး။
အကြောင်းအရာတွေလောက်ပဲ မှတ်မိပြီး စာအုပ်နံမည်တောင် မမှတ်မိလို့ Wuthering Heights ကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ပြန်ရှာတော့မှ ဖတ်ဖူးပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။
ဘာသာပြန်စာတွေရဲ့ အားသာချက်က ကိုယ်နဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀မတူတဲ့ နိုင်ငံစုံ လူမျိုးစုံတွေကို သိခွင့်ရတာပဲ။
အခုဆိုရင် ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်နဲ့ မောင်ဘလှိုင်တို့ရဲ့ ဘာသာပြန်တွေ ရွာထဲမှာ တင်ကြတာ အားရစရာကောင်းတယ်။
ဟိုတလောက ဆရာဆန်နီရဲ့ သင်ကြားရေးပုံစံနဲ့ တင်တဲ့ ပိုစ့်တွေလည်း သဘောကျတယ်။
ဆရာမကြီး TTNU ရဲ့ သင်ခန်းစာတွေတော့ Bookmark ထဲမှာ
lele ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်အကြောင်းလေးတွေလည်း ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။ :hee:
ကျမ လည်းဘာသာပြန်တွေကို ကြိုက်တာ အဲဒီ အချက်တွေကြောင့်ရယ်….
ပြီးတော့ ကျမ ကိုအစိုးမိုးဆုံးက ဆရာမဂျူးပါ…သူရေးသမျှအကုန်းလုံးကိုကြိုက်ခဲ့ တာ..ဆောင်းပါးရေးလဲဖတ်မိတာပဲ..”ကျမချစ်သော မြို့ ” “ကျမချစ်သော နိုင်ငံ” စာအုပ်ဆိုင်က ဦးလေးကြီးရယ်. သူ့ သမီးရယ် က ဆရာမ ဂျုး စာအုပ်အသစ်ထွက်ရင် အမြဲသိမ်းထားပေးတယ်.. မှတ်မှတ်ရရ ကျမရဲ့ မုန့် ဖိုးနဲ့ ဝယ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ရှိခဲ့ တယ်…”ချစ်သူရေးတဲ့ ကျမရဲ့ ညတွေ” ပန်းချီကားတွေကို ငွေစက္ကူတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာထည့်ပေးထားတာအရမ်းနှစ်သက်မိတယ်…ပြီးတော့ ဆရာ တာရာမင်းဝေ…အတွေးတွေအများကြီးပေးပြီးဆင့်ပွားတွေးခေါ်စေတယ်..ဆရာမင်းခိုက်စိုးစံ.
ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ ရာဇ၀င် စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ငိုခဲ့ဘူးတယ်……ဆရာကြီး ဦးသုခရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် လည်းသူငယ်ချင်းဆီက ယူဖတ်ဖူးတယ်.